Cali Maxamed GEEDI oo warbixin cajiib ah ka qoray xaqsiinta gobolka Banaadir | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Cali Maxamed GEEDI oo warbixin cajiib ah ka qoray xaqsiinta gobolka Banaadir
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geedi oo warbixin qoraal ah soo saaray ayaa si qoto dheer uga hadlay ansixintii xeerka matalaadda gobolka Banaadir, isaga oo u mahadceliyey Xildhibaanada Golaha Shacabka. Geedi ayaa go’aanka baarlamaanka Soomaaliya ku tilmaamay inuu yahay mid baal dahab ah ka galay taariikhda gobolka Banaadir iyo guud ahaan Qaranka. Sidoo kale wuxuu boggaadiyey doorkii madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadanaa xaqsiinta gobolka Banaadir.
Shacabka sharafta leh ee Gobolka Banaadir iyo Gobollada kaleba waxaa iyagana laga rabaa in ay taageeraan Golaha Shacabka kana difaacaan ciddii isku dayda inay wiiqdo geeddi socodka sharciga iyo hannaanka doorashooyinka dalka ee qof iyo cod ee hoggaaminayo Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka, loogana gudbayo doorasho dadban iyo in masiir ama xaq-siyaasadeed muwaadin uu ku sii jiro gacan shakhsi kale, darajada uu rabo ha lahaadee. Allaha awoodda leh kaddib, waxaa mahaddaas iska leh Golaha Shacabka BFS oo shalay ansixiyey 13 xubnood ee shacabka Gobolka Banaadir ku matali doona Aqalka Sare ee BFS. Si ka sarreysa, qaddarin iyo mahadcelin aan la koobi karin waxaa leh Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo furitaankii kalfadhigii 7aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (06.06.2020) uga dhawaaqay hindisaha matalaadda shacabka Gobolka Banaadir, si qiiro lehna uga codsaday inuu ku xurmeeyo kana aqbalo, taasoo Golaha Shacabka BFS uu hoosta la xarriiqay fuliyeyna.
Madaxweyne Farmaajo oo gudanaya waajibkiisa dastuuriga ah, kana jawaabaya rabitaanka dadkiisa, ayaa u bareeray oo dhigay sumad ama rikoodh (record) ay dhigi waayeen Madaxweyneyaashii ka horreeyey. Ugu dambayntii, shacabka Banaadir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba waxay baarlamaanka uga fadhiyaan dhamaystirka maqaamka caasimadda Muqdisho oo ah gool kale oo dhalintiisa laga sugayo Goleyaasha Qaranka iyo Madaxweynaha JFS.
Previous articleXaliimo Yarey oo ka jawaabtay eedeyntii Madasha Xisbiyada Qaran
Next articleLixdan Guurada Lixdankii: Ma shantaa laba ah, mise labadaa shanba ah?